Rafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika perla
Function: mameno ny rano sy ny compresse mangatsiaka
Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena, ity vokatra entin'ny orinasa ity dia mampiasa fitaovana japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Izy io dia afaka manampy akora ilaina amin'ny famoahana miadana.
Izy io dia mampihena ny ketrona amin'ny handrina ary mahatonga ny hoditra ho malama. Azonao ampiasaina mandritra ny 6-8 ora aza ary esorina rehefa maina izy io. Sariaka amin'ny hoditra izy io ary mety amin'ny ankamaroan'ny karazan-koditra.
Rafitra tambajotra gel tsy manam-paharoa
Mamela oksizenina mandalo izy, mamela ny hoditrao miaina sy mihidy hamandoana. Izany no antony anampiany ny hoditrao hanamboatra ny tenany sy hitazomana milamina kokoa.
Ireo sakafo mahavelona
Mitazona ny hoditra mando sy malefaka izy. Misy votoatin'ny zavamaniry voajanahary ampy ao amin'ny gel, manampy amin'ny fitrohana otrikaina sy fikolokoloana ny hoditra.
Vaovao sy mangatsiatsiaka
Tsy hahatsapa fahasahiranana sy fahasosorana ianao, ary mora be ny mampiasa azy io, any am-piasana na milalao, azonao ampiasaina izany. Ny lamban-ketrona handrina dia hijanona eo amin'ny toerany mba hahafahan'izy ireo mampitony ketrona nefa tsy voamariky ny olona.
Ny firafitr'ity vokatra ity dia vita amin'ny lamba tsy misy tenona sy hydrogel. Ny fizotry ny raikipohy dia mitovy amin'ny ravina gel manjelatra, izay vokatra efa tena matotra. Ny lamba tsy tenona dia afaka misafidy lamba tsy tenona Japoney na lamba tsy tenona Taiwan. Ny fanaraha-maso kalitao dia tsara kokoa. Saingy, noho ny fiantraikan'ny valanaretina vao haingana, ny vidin'ny lamba tsy tenona dia niovaova be. Ny lasitra dia sary efa vonona na natao ho an'ny mpanjifa.
Ny tombotsoantsika dia mitoetra amin'ny fonosana hydrogel. Ny hydrogel anay dia manana kalitao azo antoka, vidiny ambany ary atin'ny rano avo. Ny akora ampiasaintsika hamokarana hydrogels dia afarana avy any Japon, satria nosedrainay ny kalitaon'ny akora Japoney ho azo itokisana indrindra. Avy eo ny dingam-pamokarana anay dia mandray ny fanasitranana amin'ny alàlan'ny rivotra, izay tsy mitovy amin'ny fanasitranana tsy fahampian-drano ao an-trano, ny vokatrao dia misy atiny avo kokoa amin'ny rano.
Amin'ny alàlan'ity fampidirana etsy ambony ity dia mino aho fa manana fahatakarana kely momba ny vokatray izahay. Raha mila fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa ianao, azafady mba manatona anay.
Teo aloha: kofehin-tsina manandratra tarehy hydrogel sofina mihantona manandratra firming v saron-tava tarehy
Manaraka: Firaikitra ketrona tsy voatenona vozona
Stiker amin'ny tongotra